Ihe ndi sitere n'aka ulo oru ugwo maka ugwo, nwoke na nwanyi na Intanet
Onyinye wardgwọ Ọrụ na-enye ihe ọhụrụ kachasị ọhụrụ iji nyere gị aka iduzi gị site na nsogbu ndị ị na-elele ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ịntanetị. N'akụkụ a ị ga-ahụ ọtụtụ ihe na-adọrọ mmasị. Anyị amalitela ịmepụta ihe nke anyị ma na-enye nyocha nke akwụkwọ, vidiyo banyere sayensị nke porn, itinye uche na ntụgharị uche na ọtụtụ nyocha ọhụụ. Anyị na-enyekwa ndụmọdụ gbasara etu esi enweta akwụkwọ akwụkwọ sayensị mbụ. Papersfọdụ akwụkwọ na-anọ n'azụ akwụ ụgwọ, ụfọdụ na-emeghe ohere na n'efu.
Ọ bụ ezie na ụmụ mmadụ na-achụkarị mmetụta uche, nkà na ụzụ abụghị. Ọ dabeere n'echiche dị ọcha, nke e ji rụọ ọrụ na algọridim ndị e mere iji gbochie ma jide anyị. Ịntanetị bụ ụzọ dị irè na-emetụta ma nwee mmetụta dị ukwuu karị na ịmepụta ụkpụrụ omenala karịa nke ezinụlọ. Ịghọta mmetụta ya dị oké mkpa maka ọdịmma anyị, karịsịa n'ọdịnihu anyị. Iji zaghachi echiche a, anyị na-ege ntị n'ihe ndị mmadụ chọrọ ịma banyere ịhụnanya, mmekọahụ, mmekọrịta na ịntanetị. Ebe ọ bụ na etiti 2014 ọrụ anyị na ndị na-eto eto na ndị ọkachamara nọ n'ọmụmụ ihe gbasara ịzụ ụmụ nwanyị achọpụtala na enweghị afọ ojuju banyere àgwà, mkpa na irè nke ihe onwunwe nkuzi ugbu a. TRF na-ebuli ihe onwunwe iji nyere aka dozie nsogbu a.
Ndi nnochite anya nke wardgwọ wardgwọ ahụ ekwuola ugbu a karịa ihe omume iri na atọ ọha na eze gburugburu UK. Anyị agwala ndị ọkachamara ọkachamara na USA, Germany, Croatia na Turkey.
Anyị na ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-arụ ọrụ n'ụlọ akwụkwọ dum na-ekwu okwu, yana yana ha na-arụ ọrụ na obere ìgwè na otu onye. Anyị na-eji usoro ime atụmatụ mmadụ na-eme ka mmadụ nwee ike ịzụlite ihe ọ bụla o kwere mee.
Anyị nwere ụlọ ọrụ ọhụụ zuru ezu maka otu ụbọchị maka ndị ọkachamara ahụ ike na-eme ka ihe gbasara 7 na-aga n'ihu na-arụ ọrụ. N'afọ sochirinụ Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ ahụ ga-eweta atụmatụ mmụta maka iji ụlọ akwụkwọ praịmarị na ụlọ akwụkwọ sekọndrị na-enye ọzụzụ maka ndị nkụzi iji ha mee ihe.
Lee ụfọdụ n'ime ihe ndị anyị nwere ugbu a…
Ụgwọ Ụgwọ Ọrụ adịghị enye ọgwụgwọ.